Sida looga saaro taleefan duug ah Google Play Store | Androidsis
Waa wax macquul ah in xoogaa ka dib waxaad badashaa taleefanka Android. Telefoonkan casriga ah ee cusub waxaad u isticmaali doontaa isla koontada Google ee aad horey ugu lahayd tan kale, maadaama ay tahay tan ugu raaxada badan. In kasta oo marka laga soo dajinayo barnaamijyada Google Play waa inaan ka taxaddarnaa. Tan iyo markii aan ku soo dejisan karno codsiyada taleefankii hore qalad, tan iyo markii labada qalab ay ka soo baxaan koontada.
Tani waxay u maleyneysaa inaan ku qasbanahay ka saar telefon duug ah ka dhaha google play. Dhibaato guud oo isticmaaleyaal badani aysan si fiican u aqoon sida loo xalliyo. Waa wax fudud oo lagu guuleysan karo, oo aan hoosta kuugu sheegi doono. Marka waad ka saari kartaa koontada dhowr talaabo.
Fikraddu waa inaad baxdo kaliya ku xiran koontada taleefanka aan isticmaalno. Haddii ay xaaladdu tahay inaad isticmaasho laba taleefan oo Android ah oo lala xiriiriyo koonto, waa inaad uga tagtaa taleefannadan isku mid, si aad awood ugu yeelato inaad kala soo baxdo codsiyada ama ciyaaraha tooska ah dushooda. Xaaladaha oo dhan, talaabooyinka ay tahay inaan raacno waxay noqon doonaan kuwo isku mid ah.
Sidee looga helaa barnaamijyo lacag la'aan ah Google Play
1 Ka saar taleefan duug ah Google Play
1.1 Tirtir taleefanka
1.2 Beddel magaca
Ka saar taleefan duug ah Google Play
Astaantan ayaa xoogaa xadidan xilligan. Farsamo ahaan, kama saari karno taleefanka la yiraahdo koontadayada Google Play. Waxa aan qaban doonno waa joojiyaa muujinta marka aan aadno soo dejinta codsiyada dukaanka rasmiga ah. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan taleefannada Android ama kiniinnada aannan isticmaalin sanadkii la soo dhaafay si toos ah ayaa loo tirtirayaa. Marka waa inaan si fudud u sugno inay tan dhacdo, iyadoo la joojinayo isticmaalka aaladda la yiri. In kasta oo hawshu ay tahay mid aad u fudud, waxaan ku sameyn karnaa taleefanka ama kombiyuutarka.
Haddii aan dooneyno inaan ka takhalusno taleefanka la sheegay, waxaan u isticmaali doonnaa kumbuyuutarka si ka fiican kiiskan. Bog furaha ku dhex jira, waxaan ka geli doonnaa Google Play Store, link this. Dukaanka arjiga gudihiisa, guji astaanta maaddada geeska ee midigta sare, taas oo naga siin doonta marin u helka dejimaha koontada ku jirta.
Marka xigta waxaan u galaynaa qaabeynta, halkaasoo aan ku haysanno dhowr ikhtiyaar. Mid ka mid ah qaybaha ku jira waa tan Qalabkeyga, taas oo ah ta ina danaysa. Halkan waxaan ku arki karnaa dhammaan taleefannada ama kiniinnada la xiriira koontadayada. Kadibna waa inaan adeegsanno muuqaalka muuqaalka, si aan u calaamadeyno ama u calaamadeyno qalabkaas aanan dooneynin inaan tusno markaan ka soo dejineyno barnaamijyada Google Play. Sidaa darteed, waxaan calaamadeynay taleefankii hore.
Qaabkan ayaan "uga saarnay" koontada. Markaan u aadno inaan ka soo degsanno barnaamij dukaan rasmi ah, waxaan arki doonnaa in aaladdaas aan dib dambe loo sii deyn doonin. Haddii aad isku daydo inaad kala soo baxdo barnaamij isla marka aad tan sameyso ka dib, taleefanka wali wuu bixi karaa. Isbeddelku wuxuu qaadan karaa dhowr daqiiqo si ay u dhacdo.
Sida miisaaniyad loogu dejiyo Google Play
Wax aad xaqiiqdii garatay ayaa ah magacyada taleefannada lagu soo bandhigay Google Play Iyagu ma aha magacyada moodooyinka. Tani waxay adkeyneysaa inaad kala soo baxdo barnaamij qalabka saxda ah waqtiyada qaarkood. Haddii aad rabto, waxaa jira suurtagalnimada inaad u bixiso magacyo habboon. Marka waxaad u adeegsan kartaa magaca moodelkan sida, tusaale ahaan, si aad uga dhigto mid aad u fudud inaad kala soo baxdo barnaamij ama ciyaar ku dhex jirta.
Qaybta aaladaha aan ku dhex jiro ayaan magacyadooda ku saxi karnaa. Liiska ay taleefannadu ka soo baxaan, waxaan ku leenahay sax xulashada edit. Adoo gujinaya, waxaa naloo siin doonaa suurtagalnimada inaan siinno magac noo fudud oo aan aqoonsanno mar walba. Marka, markay tahay inaan wax ka soo degsanno dukaanka, way noo sahlanaan doontaa mana ku dagsan doonno taleefan qaldan. Markii aan magaca badalnay, waa inaan gujineynaa cusbooneysiinta, si isbeddelkaan u dhici doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida looga saaro taleefan duug ah Google Play
Maamuusku wuxuu diiwaangeliyaa codsiyo ganacsi oo dhowr ah oo loogu talagalay taxaneheeda 'X' ee casriga ah